Gibran Khalil Gibran. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Iyo purofiti. | Zvazvino Zvinyorwa
Gibran Khalil Gibran. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Iyo purofiti.
Simudza ruoko rwako uyo asina kuverenga CHIMWE naGibran Khalil Gibran. Iko hakuna, handiti? Nekuti kana zviripo, nhasi izuva rakanakisa rekukwira uye kutarisa. Chitsva gore rekuzvarwa wemudetembi uyu weLebanese, muzivi uye pendi, uyo akazvarwa pazuva rakaita nhasi kubva 1883. Basa rake rinozivikanwa ndere Iyo purofiti, asi ndinazvo ipapo zvakare Akapenga y Akatyoka mapapiro. Saka, kukuyeuchidza, heano mamwe zvirevo uye zvidimbu vakasarudzwa.
2 Iyo purofiti
2.2 Nezve rudo (zvidimbu)
Akazvarirwa mukati Iyo Libano asi makumi maviri emakore ehupenyu hwake hwaakararama United States, kwaakafira aine makore makumi mana nemasere. Uye kunyangwe zvizhinji zvebasa rake zvakanyorwa muChirungu, munyika yeArab zvinotorwa se mumwe wevanyanzvi venguva yake. Zvinyorwa zvake zvave rakashandurwa mumitauro inodarika makumi matatu uye basa rake rakaendeswa kunzvimbo yemitambo uye bhaisikopo. Uye pendi yake yakaratidzirwa mumahoro makuru epasi.
Zvinyorwa zvake zvakazara ne kusaziva uye tsvaga chokwadi kuburikidza naye uye madingindira ake ndeepasirese. Zita rayo rinonyanya kuzivikanwa ndere Iyo purofiti, uye zvakare kuratidza Midzimu Yevapanduki, vataurwa Akatyoka mapapiro (autobiographical chinyorwa) uye Benzikana Jesu Mwanakomana weMunhu.
Waves mazwi nemhinduro kuti, makore masere asati afa uye asati abva mutaundi maaigara, sage anotungamira vanhu iyo inokumbira iwe kuti utaure nezvenyaya dzakadai rudo, shungu kana rusununguko.
Unogona kukanganwa wawakaseka naye asi kwete uya wawakachema naye.
Ndichengetedze kubva kuuchenjeri husingacheme, huzivi husingaseka, uye hukuru husingapfugamire vana.
Izwi rakanakisa pamiromo yemurume ishoko mai, uye rinotapira kufona: amai vangu
Ndinokuudza kuti mufaro nekusuwa hazviparadzane.
Kana husiku ukachemera Zuva, misodzi haizoregi iwe kuti uone nyeredzi.
Kusuwa nehurombo zvinonatsa moyo wemunhu, kunyangwe pfungwa dzedu dzisina kusimba dzisingaone chinhu chakakosha muchisiko kunze kwekunyaradzwa uye mufaro.
Kusurukirwa inyaradzo yemweya wakasuruvara, uyo unovenga avo vakamukomberedza kungofanana nenondo yakakuvadzwa inosiya mombe yayo, kunopotera mubako umo icharira kana kufa.
Rudo haruwani zvese zvakadzika kunze kwekunge panguva dzekuparadzana.
Usakanganwa kuti pasi rinoda kunzwa tsoka dzako dzakashama uye kuti mhepo inonakidzwa nekutamba nevhudzi rako.
Mune dova rezvinhu zvidiki moyo unowana mangwanani ayo uye unozorodzwa.
Chitubu chinotumbuka chinogara mumoyo wehusiku hwese, uye kuseri kwehusiku humwe, kunouya mambakwedza anonyemwerera.
Nezve rudo (zvidimbu)
Rudo harupi zvinopfuura rwega uye harutore chinhu kunze kwaro pacharo.
Rudo haruna kana haruna
nekuti rudo runokwana rudo.
Kana iwe uchida, haufanire kuti "Mwari ari mumoyo mangu",
asi asi "Ndiri mumoyo maMwari."
Uye usafunge kuti unogona kunongedza nzira yerudo
nekuti iye, kana achivawana vakakodzera, ndiye achange achitungamira nzira dzavo.
Rudo haruna chishuwo kunze kwekuzvizadzisa.
Asi kana iwe uchida uye usingakwanise kubatsira asi uine zvishuwo, ngazvive izvi:
nyungudika uye uve serukova rwunoimba rwiyo rwayo usiku,
ziva kurwadziwa kwekunzwa kunyorova nyoro,
kukuvadzwa nepfungwa yerudo
uye kudeuka ropa nokuzvidira uye nomufaro,
muka mangwanani-ngwanani nemapapiro mumoyo mako
uye tenda kune rimwe zuva rerudo,
zorora masikati uye fungisisa mufaro werudo
uye ipapo pakuvira kwezuva, enda kumba nekutenda,
uye uvate nemunamato wewaunoda mumoyo
uye norwiyo rwokurumbidza pamiromo yavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Gibran Khalil Gibran. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Iyo purofiti.
Dambudziko remuviri mitatu